Kunezizathu eziningi zokuthukuthela kowesifazane: akazange akhale izinyembezi lapho ebona isikhumba esiphukile, wabhala "kiss" eyodwa kuphela kuma-sms futhi ukhohlwa "uthando". Ake sibone ukuthi yini ngempela emangalela izimangalo zakho, nokuthi yikuphi ukungalungi kwamadoda akufanelanga ukuqalekiswa. Ngakho ake sithole ukuthi yini ebangelwa imizwa engokomzwelo yabesifazane?
Iyini inkinga? Kwenzeka ukuthi abantu balahlekelwa imibono yakho mayelana nokuhlanzeka nokuhleleka. Abenzi ukwenziwa kwe-manicure, bagqoka ihembe elifanayo izinsuku ezimbili ngokulandelana bese beshiya amapuleti angcolile phansi eduze kwamasokisi ahlakazekile. Ingabe kufanelekile ngenkathi ebona ukuhlazeka okunjalo okucacile ngephini lokugcoba lapho ekulungele ukumlandela ekuphishekeleni indlu? Uzizwa kanjani uma ubona amasokisi phansi, uhlangene nezindleko zokudla nomagazini? Mhlawumbe, icala: indoda ayijabuleli imizamo yakho yokugcina indlu ihlanzekile. Futhi ngokushesha ufika esiphethweni esingenangqondo: ayisekeli ukuhlanzeka - kusho ukuthi ayithandi.
Yini okufanele ngiyenze? Iziphetho ezingenakuzethemba zizophela enhloko uma sikhuluma ngalokho okuhlangenwe nakho kwethu kumakheli wezimangalo futhi siqiniseke ukuthi akaphumanga nje ngoba umyalelo uyinto encane kuye, hhayi ngenxa yokuthi ukuyeka ukukuthanda. Cabanga ngesimo esingafani - indoda idinga ukuhlanzeka okungaphelele, futhi ukhuluma nemibandela yokuhleleka ngokukhululekile. Yini elula - ukuba uhlale ungcolile noma uhamba ngezinyawo? Kokubili akulula, kodwa ungavumelana ngemithetho ozoyibona kokubili.
Kwenzekani? Angakwazi ukuchitha cishe wonke umholo wakhe ku-console entsha futhi kusukela kulolo suku futhi ayeke ukuphonsa amasokisi, ngoba ngeke nje awakhumule - akumangalisi lapho injabulo isesandleni sakhe. Kuyakucasula ukuba ukhulele, kodwa akwenzi. Usuvele ucabanga ngezingane kanye nezindleko zangasese, futhi enengqondo yakhe izakhamuzi eziqhubekayo nezitha ezithandwayo.
Okokuqala, kufanele uvume ukuthi wonke umuntu unomfana omncane ekugugeni kwakhe-yingakho ethanda amathoyizi, izikhali, izimoto. Futhi endleleni, ngenxa yokuzikhethela kwezingane kanye nesibindi, iningi lezinto ezitholakele zesayensi zenziwa ubulili obuqinile. "Uma kubonakala kuwe ukuthi ubuntwana buyingane ethandekayo ngaphezu komphetho, mhlawumbe ebuhlotsheni kukhona i-hyperopeak, ngoba izindima zombili zivame ukuhambisana." Uma lokhu kuzwakale njengeqiniso, zama ukufunda ukuthi ungaxhumana kanjani nengxenye yakho yesibili ngokulingana okulinganayo, njengomlingani wakho, hhayi ukugxeka noma ukukhomba.
Ubiza, uthatha ifoni, uthi uzobuya, kodwa akenzi isikhathi sehora. Ushayipha inombolo yakhe ngokwakho, kodwa uyayiphonsa. Khona-ke uya ekhaya ngemva kwamabili. Ngokwemvelo, ucabanga ukuthi wayengekho emhlanganweni, kodwa unkosikazi. Lesi yisizathu sokuqala esibangela ukucindezeleka ngokomzwelo kwabesifazane. Kodwa ngisho nalapho ukuqonda okuwusizo kunqoba, umhawu usalondolozwa, kodwa hhayi kumbono omuhle, kodwa kumsebenzi wangempela uqobo - kubaluleke kakhulu kunakho? Noma kunjalo, vumela, umhawu omncane ukuthi unesithakazelo kakhulu kuye, futhi awunaso isifundo sokuthanda.
Kumele samukele iqiniso lokuthi amadoda avame ukugxila kakhulu ebhizinisini labo kunathi. Kubo, lokhu yingxenye ebaluleke kakhulu yokuphila, indlela yokuziveza. Mthembise futhi ungangenzi ngihambe nawe ku-vet, ngoba i-parrot izolohla! Umsebenzi womunye umuntu uvame ukucasula uma kunesikhathi sokunganeliseki. Yenza umsebenzi wakho, ukuzilibazisa, umndeni, abangane - konke okwenza impilo yakho icebile futhi ithakazelise. Khona-ke ebusuku kusikhundla sezintandokazi zezicelo uzokuzwa indaba yakho mayelana nosuku olusetshenziswe ngokuphawulekayo.
Izitatimende ezinjengokuthi "Angazi ukuthi nginikeza usuku lwami lokuzalwa", "zikhethele ukuthi sizokudla nini" noma "Angizange ngithenge ikhekhe ngoba angiqiniseki ukuthi unayo yini imithi yokwelapha", ecasulayo, ngoba amantombazane amaningi ayaqiniseka , ukuthi indoda yangempela kufanele ikwazi izimpendulo zemibuzo yonke! Uma esho okuthile okunjalo, ikusasa lakho elibuhlungu libonakala kuwe emidwebeni - usendlini enezingane ezinhlanu, ubiza futhi kusuka esitolo bese ebuza: "Bantfwana, uthenge ubisi ngamafutha ka 3.2% noma 3.5%?" Lokho kwakusho "umfana wathi - lo mfana wenza."
Okokuqala, lokho okubiza ngokuthi ukungabaza kungase kube isibonakaliso sothando olukhulu (uyabuza ngoba ufuna ukuba uyithande), isignali eyingozi yokungazethembi (ukwesaba ukungajabulisi) noma ukuvala ukukhathala (yini okufanele ukhethe yokudlela?) . Amandla nokuzethemba okumelwe abonise emsebenzini, nabangani ngisho nangezinye izikhathi nomama wakhe. Zama ukubheka ubuthakathaka njengophawu lokuthembela, futhi mhlawumbe ngeke kube lusizi kakhulu.
Sekuvele, umhlangano uhlukanisa umthethosivivinywa wokudla ukudla endaweni yokudlela. Wena, eqinisweni, uyaphika umqondo omdala futhi ohlazisa ukuthi "ngubani odla isidlo sakusihlwa, udansa", kodwa izwi langaphakathi linikeza izimpawu ze-alamu - elilodwa elide, elincane. Awakholelwa ukuthi unzima kakhulu. Kubonakala sengathi imithetho yemithetho nokubukwa kwanamuhla yizethulo zanamuhla, kodwa lokhu akuhlangene nothando.
Yini okufanele ngiyenze? Okokuqala, udinga ukwethembeka. Uma ucabanga ukuthi umuntu onenhloso eqinile akufanele avumele owesifazane ukuba ahlanganyele ekukhokeleni ukuzijabulisa nokudla, bese uthi kanjalo. Phela, angabelana ngesimo sakho, kepha uma uzwa okuphambene naye, uzoyesaba ukukucasula. Izinkinga zebhajethi zivame ukuba isikhubekiso futhi zibe ngamabhangqwana amisiwe. Futhi lapha, futhi, udinga ukuxoxisana nokubeka imithetho.
Ulalela ingoma yasendlini, futhi ubaba kusuka kubadwebi abafundiswa edwaleni lobudala. Ngesikhathi usakha ipharadesi yasendlini ekhishini, uhlanganisa "Kodwa ngizoyibeka ngomuntu, ngiye epulazini elihlangene, ngiye phansi." Ngemuva kwalokho, uMick Jagger wakho wangaphakathi uyakunxusa ukuba uthule umshayeli wamasela abe yi-arsenic eshisayo. Mhlawumbe uyesaba ukuthi abangane bayokwazi ngalokhu (mayelana nothando lwakhe ngoma-chanson, umphenyi uDontsova noma u-cross-stitching). Lo mbono uyadabukisa - kodwa ovamile. Sibona abalingani njengengxenye yethu, ngakho-ke izinto zabo zokuzilibazisa ziyingcosana yethu. Futhi ziyisimangaliso! Ungazami ukukholisa indoda ukuthi uDontsova akayena oyinhloko yamazwi, uma imisebenzi yakhe imthinta ekujuleni komphefumulo wakhe. Vele ucele ukuthi ungaphumeli netlenku kubangani bakho. Vumelana ukuthi uzolalela ingoma kuma-headphones noma lapho engekho. Ngokuqinisekile, ukuzithokozisa kwengxenye yesibili akuyona nje into yokuzilibazisa okukucasulayo. Zama ukuthola okuthile okuletha ingqikithi yakhe yangaphakathi eduze ne-Jagger yangaphakathi - mhlawumbe iyahamba noma ipheka. Uma ungafiki esivumelwaneni sokuthula, awusoze ukhohlwa ukuthi yini ebangelwa imizwa engokomzwelo yabesifazane.
Ubani lawa mazwi angajwayelekile kusuka efonini yakho? Kungani ama-sms "asebenza" elandela emva kokuyishumi? Kungani umkhonto namuhla ufushane kangaka? Uphi phakathi kuka-17: 15 no-17:28? Konke lokhu okokuqala kumnandi, bese kuqala ukucasula kabi. Umhawu onamandla nokuthembela kukhona izinto ezingahambisani, futhi wena, nakanjani, uphukile.
Okokuqala, ake ucabange ukuthi akahawukeli nhlobo futhi akakhathaleli ukuthi uphendula bani emva kwamabili, nokuthi uyaphi usuku lokuzalwa lwakho lokuzalwa kwakho. Uzozizwa uthandwa? Okwesibili, zama ukuqonda imizwa yakhe futhi ungaphenduli imibuzo ebuhlungu (okubonakala kubonisa ukuthi unecala) - leli qhinga lizoduduza umhawu.
Ngesinye isikhathi basenza izinto ze-wit. Futhi akuhlali njalo kumnandi. Kubonakala kuwe ukuthi uma uthanda, ngakho-ke akufanele uqaphele, ungazishiyi uhlekise noma yikuphi ukuthanda kwakho, ukwehluleka noma izihlonipho. Ngakho-ke, akayithandi - ulinganisa ngokulinganayo! Futhi ngezinye izikhathi kuvele kuhlambalaza kakhulu ukuthi awukwazi ukuhleka usulu. Yini okufanele ngiyenze? Uma amahlaya engahlaziyi, khona-ke into elula kakhulu ukuyihleka. Futhi ulungiselele kusengaphambili iziteleka eziningana zokuziphindisela. Ukumisa, kunzima kakhulu ukuthi abesifazane bakwazi ukuthuthukisa kahle, kodwa sihle futhi asidingi ukulinganisa nabangani bentombazane ubukhulu bezimoto! Indoda enenjabulo iyinhlanhla. Ungathola kalula ukuphazamiseka. Intukuthelo umuzwa ongenakuveza: okhubekile unzima kakhulu kunomuntu ohlangene nakho okuhlangenwe nakho kwakhe. Ukusekela umdlalo wakhe!
Izigidi zamadoda zikhohlwa ukuthi kudingeka sizinake ngemuva kwesikhathi se-bouquet-candy. Ngomhla weshumi nane kuFebhuwari nango-8 kuMashi akuzona amaholide kubo, kodwa babheka imfucuza engenangqondo njengezipho ngaphandle kwesizathu. Wena, yebo, ucabanga ukuthi uvele othandweni nawe - kahle, wayevame ukunikeza izimbali, akhumbule izinsuku futhi azibambe njalo ngaphambi kokushiya emsebenzini.
Yiqiniso, akazange ayeke uthando. Kodwa isikhathi ngaphansi kwegama elithi "akukho suku ngaphandle kokumangala" siphelile ngempela. Futhi manje kuyadingeka ukuthi usebenze ekulondolozeni uthando ngobudlelwane. Kufana nomuntu-okokuqala kuphelele, futhi eminyakeni embalwa nje kuthatha ihora ngosuku ukuze ungasuki ku-treadmill. Zama ukubuya ekhaya kusuka emsebenzini ngeqembu lama roses - ake ucabange ukuthi ufuna. Amathuba ukuthi izipho ziyofafaza kuwe emva kokubonisa, njengeqhwa ngoFebhuwari, akuyona into enkulu kakhulu, kodwa kuyindlela enhle yokuqala ingxoxo mayelana nokuthi awunalo uthando. Indoda ehlala ebuhlotsheni obusondelene kaningi ayiboni isidingo sokubonakalisa imizwa, ngoba usuvele wazi konke - uyakuthanda. Esikhundleni sokuthukuthelisa buthule, kungcono ukuya kuye uthi: "Lalela, ngiyahluleka, ngithenge izimbali!"
Kungakhathaliseki ukuthi bathanda kanjani amadoda, isithakazelo sabo kwabanye besifazane sisaphila futhi sinamandla. Lokhu kubonakala ngezindlela ezehlukene: othile ubheka izithombe zobulili ezingcolile noma uzenza sengathi ufunda omagazini bamadoda. Abanye abantu babheka abanye phambi kwakho. Yiqiniso, ukugxila kokuqala ezimweni ezinjalo ukuphonsa ingilazi yamanzi noma yimuphi omunye uketshezi lokushisa okungaqondakali ebusweni bomuntu onolwazi. Kusobala ukuthi ukuziphatha kwakhe kuhlwanyela kuwe okusanhlamvu kokungaqiniseki - kunokuba ama-blonde amafoto angcono? Kubonakala sengathi uqale ukumthanda kancane.
Hlalani phansi! Ukuqhaqhazela nokuhamba ngokweqile kwesikrini besifazane abenqunu akuyona ingozi kunomakhelwane wakho oneminyaka engamashumi ayisikhombisa. Futhi uma umuntu engayinaki amantombazane amahle, kubangela ukusola. Sincoma ukuba ulandele isimiso sobuqiniso, hhayi ukucabanga: "Uma ufuna ukuphonsa into enzima kuye, lapho ebheka ubuhle obulandelayo, thatha umoya ojulile futhi ucabange:" Kodwa usekhona nami noma kunjalo. " Futhi hlola ukuthi kwenzekani ekuhlukuneni kwakho? "
Amafutha aseSandwood, izakhi zokwelapha
Kuyini i-adenoids nokuthi ungayiphatha kanjani?
Izimbangela nokuphathwa kwe-thrush
Imikhiqizo ehloniphekile yaqala ukukhulula izikhwama zazo ngezilinganiso eziningana ukuze kukhuliswe isidingo
Ukwanda kwengcindezi yegazi kwabasha
Yikuphi ukudla okungadliwa ngesifo se-celiac
Kungcono kanjani ukulala?
Nciphisa i-cholesterol futhi uhlanze imithwalo yegazi
Indlela yokuzijwayeza kwi-treadmill
Izakhiwo eziwusizo zamalenti
TOP-3: Izindlela zokupheka okumnandi kunazo zonke zokudla ukudla ngokusheshisa